Photoshop Iswaafajin hore oo hadda la heli karo | Abuurista khadka tooska ah
Markii aan iskula macaamilayno laptop-ka, ka dibna kombuyuutarka kumbuyuutarka ee kumbuyuutarka isla markaana aan wax ka beddel kama dambays ah ka samaynno raaxada barnaamijka moobiilka, xaqiiqda ah in la rakibo hab-raaca qalab kasta wuxuu noqonayaa mid culus, oo laga bilaabo "xilli kale". Way yimaadaan ugu dambayntii iskuduwaha hore-u-dejinta Photoshop.
Iyo inkasta oo ayna la iman dhammaan wixii aan jeclaan lahayn, maxaa yeelay Ma aragno meel kasta ficilada noo oggolaanaya in aan shaqeysiino howlaha (oo waqti badan badbaadi markaad la macaamilayso dufcadaha sawirrada iyo in ka badan), waa run in qiyaas ahaan ugu horreysa ay aad u wanaagsan tahay.
Sidee loo ururiyaa soo dhawow shaashadda markaan cusboonaysiinno Adobe Photoshop, hadda waad kicin kartaa iswaafajinta horena u adeegsan kartaa mid ka mid ah rakibaadda aad ku leedahay barnaamijkan weyn qalab kasta.
Waxaan ka hadleynaa waxa burush, gradients, swatches, qaababka, qaababka iyo qaababka ayaa isku mid ah. Waqtigan xaadirka ah cusboonaysiintaan waxaa keliya oo loo heli karaa noocyada desktop-ka ee Windows iyo Mac; laakiin dhawaan ayey u imaan doontaa iPad-ka si aan u ilaawno ku habeynta qalab cusub sida kan Apple.
Si aad udhaqaajiso muuqaalkan cusub:
Aan aadno Dookhyada> Guud> Iswaafajinta hore waanan dhaqaajinaa
Tani waxay tusineysaa in amarka galka, kooxaysiga iyo qaabdhismeedka halkaas lagu xushmeyn doono meesha aad ku shaqeysay hawshan, ha dib u dhigin haddii aadan rabin inaad waqti ku lumiso marka aad hesho qalab cusub oo aad ku rakibayso Photoshop.
Mid kale oo weyn Wax cusub oo Photoshop ah oo soo socda maanta oo loogu talagalay horudhaca isla mar ahaantaana awoodda lagu casuumo dadka kale wax ka beddel dukumiintiyadayada daruurta dhexdeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Nidaamiyaha hore ee Adobe Photoshop ayaa ugu dambeyntii yimid